Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Dharka Ah Oo Aan Ku Xidhnayn Meltblown | Rayson
Meltblown dhar aan tolmo lahayn waxaa laga sameeyaa farsamo gaar ah oo loogu talagalay soo saarista dhar aan tolmo lahayn oo leh fiilooyin aad u wanaagsan. Dharka aan dhalaalin ee dhalaalay-dhalaalaya waa qayb muhiim u ah sameynta wajiga wajiga oo ka ilaaliya shaqaalaha caafimaadka coronavirus-ka cusub. Mashiinka miiraha ee dhalaalay waa qaybta muhiimka ah ee neefsadayaasha oo bixin kara inta badan ilaalinta. Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa qalabka wax lagu neefsado ee la tuuri karo, maaskarada qalliinka, waji-wajiga, dib-u-adeegsiga neefsashada boodhka, iyo qalabka neefsashada. Maaddaama fayrasku ku faafo adduunka, maaskaro wajiyadaas ayaa gabaabsi ah.
Maqaarka Mellblown nors-ka
Waa maxay waxa dhalaalaya dharka laga sameeyay?Dharka Mellblown no tonn no to waxaa laga sameeyaa farsamo gaar ah oo loogu talagalay wax soo saarka dharka aan lagu dhejin karin oo leh fiilooyin aad u wanaagsan. Dharka macaan ee dharka lagu dhejiyo waa qaybta ugu muhiimsan ee maaskaro oo bixin kara inta ugu badan ilaalinta. Dharka aan loo xilsanayn ee maaskaro leh ayaa leh shaqo xayeysiis electrostatic ah, kaas oo ka saari kara bakteeriyada. Rayson waa soo-saare dhalaalay, oo siiya dhar jilicsan oo aan ahayn dhar aan la qorin 25gr maaskaro.
Dharka Mellblown no tonn no to
Niyad jajaban dharka aan lagu dhejin waxaa laga sameeyay farsamooyin gaar ah oo loogu talagalay wax soo saarka dharka aan la soo koobi karin oo leh fiilo aad u wanaagsan. BFE 99% Liibaanta ayaa si weyn loo isticmaalay in lagu soo saaro maaskaro wajiga wejiga, wejiga wajiga qalliinka, oo ay si fiican u iibiyaan oo caan ku yihiin garoonka kala duwan ee warshadaha. MicyFibers waxay bixiyaan dhul sare oo loogu talagalay astaamaha wanaagsan ee loo yaqaan 'pather-ka'. Waxay ka hortegi doontaa infekshanka ka dhexeeya dadka iyo faafitaanka bakteeriyada kala duwan ee xilliyada kaladuwan. Waxay sidoo kale si wax ku ool ah uga hortagi kartaa xasaasiyadda manka waxayna yareyn kartaa waxyeelada waxyaabaha waxyeelada leh ee jirka bini aadamka. Waxaa lagu doorbiday dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha caafimaadka, iyo shaqaalaha kale ee caafimaadka.
Qalabka korantada ee elektiroonigga ah ee ilkaha
Dharka Mellblown Dharka aan laga sameynin waxaa laga sameeyay farsamo gaar ah oo loogu talagalay wax soo saarka dharka aan la soo saarin ee ku habboon fiilooyin aad u wanaagsan. Muuqaalka ay ka mid ah xargaha korantada electrostatic waxay ka dhigeysaa bakteeriyada.